एक्वैरियम को लागी ब्याकप्याक फिल्टर: सबैभन्दा कुशल र मौन मोडेल | माछाहरुको
ब्याकप्याक फिल्टर एक एक्वैरियम, ठूलो वा सानो को लागी एक राम्रो विकल्प हो, र यो फरक पर्दैन यदि तपाइँ माछाको संसारमा वा एक महान अनुभव संग एक aquarist नयाँ हुनुहुन्छ। उनीहरु धेरै पूरा उपकरणहरु छन् कि सामान्यतया फिल्टरिंग को तीन प्रकार प्रदान गर्दछ, अन्य धेरै रोचक सुविधाहरु को अतिरिक्त।
यस लेखमा हामी बिभिन्न ब्याकप्याक फिल्टरहरु को बारे मा कुरा गर्नेछौं, उनीहरु के हुन्, कसरी उनीहरुलाई छनौट गर्ने र कुन ब्राण्डहरु सबैभन्दा राम्रो छन्। र, यदि तपाइँ यस विषय मा रुचि राख्नुहुन्छ र गहिराई मा आफैंलाई सूचित गर्न चाहानुहुन्छ, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ यो अन्य लेख को बारे मा पढ्नुहोस् एक्वैरियम फिल्टरहरू.
1 एक्वैरियम को लागी सबै भन्दा राम्रो ब्याकप्याक फिल्टर
2 एक ब्याकप्याक फिल्टर के हो
3 फिल्टर को यस प्रकार को लाभ र हानि
4 सर्वश्रेष्ठ ब्याकप्याक फिल्टर ब्रान्डहरु
5 कसरी हाम्रो एक्वैरियम को लागी एक ब्याकप्याक फिल्टर छनौट गर्न को लागी
5.1 एक्वैरियम माछा
5.2 एक्वैरियम मापन
5.3 एक्वैरियम प्रकार
6 शान्त ब्याकप्याक फिल्टर के हो?
7 के तपाइँ एक माछा ट्यांक मा एक झोला फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ?
एक्वैरियम को लागी सबै भन्दा राम्रो ब्याकप्याक फिल्टर
AstroAqua- फिल्टर ब्याकप्याक ...
BPS व्यावसायिक फिल्टर ...
ब्याकप्याक फिल्टर को लागी ...
फ्लुवल फिल्टर C2
ब्लू एक्वैरिस्टिक 7700060 XNUMX०००XNUMX० ...
एक ब्याकप्याक फिल्टर के हो
ब्याकप्याक फिल्टर एक्वैरियम फिल्टर को सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार मध्ये एक हो। जसरी नामले सुझाव दिन्छ, उनीहरु एक्वैरियम को एक किनारा बाट झोला जस्तै झोला जस्तै झुण्डिए। यसको अपरेशन सरल छ, किनकि उनीहरु केवल पानी अवशोषित गर्छन् र यसलाई गिर्नु अघि आफ्नो फिल्टर को माध्यम बाट पास, यो एक झरना जस्तै, फिर्ता माछा ट्या into्की मा, पहिले नै सफा र अशुद्धता मुक्त।
ब्याकप्याक फिल्टर तिनीहरू सामान्यतया फिल्टर को तीन फरक प्रकार को शामिल छन् कि एक्वैरियम द्वारा आवश्यक सबैभन्दा सामान्य फिल्टरि making बनाउन को प्रभारी छन्। मेकानिकल फिल्टरेशन मा, पहिलो जसको माध्यम बाट पानी बित्छ, फिल्टर सबैभन्दा ठूलो अशुद्धता हटाउँछ। रासायनिक फिल्टरिंग मा, सबैभन्दा सानो कणहरु लाई हटाईन्छ। अन्त्यमा, जैविक निस्पंदन मा ब्याक्टेरिया को एक संस्कृति बनाईएको छ कि तत्वहरु लाई हानिकारक मा माछा को लागी हानिकारक बनाइन्छ।
फिल्टर को यस प्रकार को लाभ र हानि
ब्याकप्याक फिल्टरहरु को एक संख्या छ फाइदा र बेफाइदाहरू यो उपयोगी हुन सक्छ जब छनौट गर्न को लागी कि यस प्रकार को एक फिल्टर प्राप्त गर्न को लागी हो या नहीं।
फिल्टर को यो प्रकार एक छ लाभ को एक ठूलो संख्या, विशेष गरी यसको बहुमुखी प्रतिभा को बारे मा, जो यो कुनै पनी आरम्भ को लागी एक सही कार्य बनाउन:
तिनीहरू ए धेरै पूरा उत्पादन र एक महान बहुमुखी प्रतिभा को छ कि सामान्यतया फिल्टरिंग को तीन प्रकार कि हामी (यांत्रिक, रासायनिक र जैविक) टिप्पणी गरीएको छ।
उनीहरु एक हुन्छन् समायोजित मूल्य.
तिनीहरू धेरै छन् इकट्ठा र प्रयोग गर्न को लागी सरलयही कारण हो कि उनीहरु शुरुवात को लागी अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ।
ठाउँ नलिनुहोस् एक्वैरियम भित्र।
अन्तमा, सामान्यतया यसको रखरखाव धेरै महँगो छैन (समय को शर्त मा, अधिक वा कम दुई हप्ता क्षमता र गंदगी कि एक्वैरियम, र पैसा मा जम्मा मा निर्भर गर्दछ)।
जे होस्, फिल्टर को यो प्रकार पनि केहि बेफाइदा छ, विशेष गरी प्रजातिहरु संग सम्बन्धित छ कि यो सहन को लागी अरु को रूप मा राम्रो देखिदैन:
फिल्टर को यो प्रकार तिनीहरू झींगा संग एक्वैरियम को लागी सिफारिश गरीदैन, किनकि उनीहरु उनीहरुलाई चुस्न सक्छन्।
लाई betta माछा या त उत्साही छैनन्फिल्टर को रूप मा पानी को एक धारा को विरुद्ध जसको कारण यो उनीहरुलाई पौडी खेल्न को लागी गाह्रो हुन्छ।
El रासायनिक फिल्टर यो धेरै राम्रो वा कम से कम, अन्य दुई को रूप मा राम्रो परिणाम को रूप मा नदिनुहोस् हुन जान्छ।
त्यस्तै गरी, ब्याकप्याक फिल्टर कहिलेकाहीँ उनीहरु अलि अक्षम छन्किनकि उनीहरुले भर्खरै कोरेको पानी पुन: प्रशोधन गर्न सक्छन्।
सर्वश्रेष्ठ ब्याकप्याक फिल्टर ब्रान्डहरु
बजारमा हामी फेला पार्न सक्छौं तीन रानी ब्रान्डहरु जब यो ब्याकप्याक फिल्टर को लागी आउँछ यो तपाइँको एक्वैरियम मा पानी फिल्टर को लागी चार्ज हुनेछ जब सम्म यो सुन को जेट जस्तै देखिन्छ।
हामीले पहिले नै को बारेमा कुरा गर्यौं AquaClear फिल्टर हालसालै। यो निस्सन्देह दुबै विशेषज्ञ र नौसिखिया aquarists द्वारा सबैभन्दा सिफारिश गरिएको ब्रान्ड हो। यद्यपि यो बाहिर खडा छ कि यो अरु को तुलना मा केहि हद सम्म उच्च मूल्य छ, यसको उत्पादनहरु को गुणवत्ता निर्विवाद छ। यसको फिल्टर तपाइँको एक्वैरियम मा पानी को लीटर मा क्षमता अनुसार विभाजित छन्। थप रूपमा, उनीहरु फिल्टर (स्पंज, कोइला ...) को लागी स्पेयर पार्ट्स बेच्छन्।
यो ब्रान्ड को फिल्टर उनीहरु बर्ष र पहिलो दिन को लागी काम गर्न सक्छन्। तपाइँ मात्र एक सही रखरखाव गर्न को लागी हुनेछ ताकि इन्जिन बाहिर जलाउन छैन।
Eheim बाह्य फिल्टर ...
एक जर्मन ब्रान्ड पानी संग सम्बन्धित उत्पादनहरु को निर्माण मा excels, यो एक्वैरियम वा बगैंचा हो। यसको फिल्टर, बजरी क्लीनर, स्पष्टीकरण, माछा फीडर वा एक्वैरियम हीटर विशेष गरी बाहिर खडा। यो एक धेरै रोचक ब्रान्ड हो कि न केवल उपकरणहरु बेच्दछ, तर ढीला भागहरु र यसको फिल्टर को लागी लोड।
चाखलाग्दो कुरा, यो निर्माता को पानी पम्पहरु, मूल रूप मा एक्वैरियम को लागी बनाईएको हो, पनि भैरहेको छ सर्भर कूल गर्न को लागी कम्प्युटिंग सन्दर्भ मा प्रयोग गरीरहेको छ एक निरन्तर, कम शोर र कुशल तरीका मा।
ज्वारभाटा छ महान गुणवत्ता को एक अर्को ब्रान्ड जसको साथ हामी ब्याकप्याक फिल्टर किन्न सक्छौं हाम्रो एक्वैरियम को लागी। यो Seachem को हिस्सा हो, संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक प्रयोगशाला विशेष गरी रासायनिक उत्पादनहरु को लागी समर्पित छ, उदाहरण को लागी, उत्तेजक, फास्फेट नियन्त्रण, अमोनिया परीक्षण ..., यद्यपि यो पानी पम्प वा फिल्टर पनि शामिल छ।
ज्वार फिल्टर अन्य ब्रान्डहरु मा शामिल छैन सुविधाहरु को पेशकश को लागी प्रसिद्ध छन् फिल्टर को, उदाहरण को लागी, समायोज्य पानी को स्तर वा मलबे को लागी एक क्लीनर कि पानी को सतह मा जम्मा।
कसरी हाम्रो एक्वैरियम को लागी एक ब्याकप्याक फिल्टर छनौट गर्न को लागी
एक ब्याकप्याक फिल्टर छनौट कि हाम्रो आवश्यकताहरु र हाम्रो माछा को ती पनि एक चुनौती हुन सक्छ। यसैले हामी तपाइँलाई यो प्रस्ताव गर्दछौं दिमाग मा राख्न को लागी सुझाव को श्रृंखला:
हामी एक्वैरियम मा माछा मा निर्भर गर्दछ, हामी फिल्टर वा अन्य को एक प्रकार को आवश्यकता हुनेछ। उदाहरण को लागी, हामीले भने जस्तै, ब्याकप्याक फिल्टरहरु बाट बच्न यदि तपाइँ एक झींगा वा betta माछा छ, किनकि उनीहरु लाई यी फिल्टरहरु लाई बिल्कुल मन पर्दैन। अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ ठूलो माछा छ कि धेरै गन्दा छन्, एक ब्याकप्याक फिल्टर को लागी एक काफी शक्तिशाली मेकानिकल निस्पंदन छ कि छान्नुहोस्। अन्त मा, एक राम्रो जैविक निस्पंदन धेरै माछा संग एक्वैरियम मा धेरै महत्वपूर्ण छ, अन्यथा पारिस्थितिकी तंत्र को नाजुक सन्तुलन बर्बाद हुन सक्छ।
एक्वैरियम को मापन हो समान रूपमा महत्त्वपूर्ण जब एक फिल्टर वा अर्को छनौट। यही कारणले गर्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि, एक मोडेल वा अर्को मा निर्णय गर्नु अघि, तपाइँ गणना गर्नुहोस् कि तपाइँको एक्वैरियम को क्षमता छ र तपाइँलाई सफा राख्न प्रति घण्टा प्रशोधन गर्न को लागी फिल्टर को आवश्यकता छ। खैर, ब्याकप्याक फिल्टर विशेष गरी साना र मध्यम एक्वैरियम को लागी उपयुक्त छन्। अन्तमा, यो पनि एक राम्रो विचार हो कि तपाइँ एक्वैरियम राख्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ, फिल्टर किनारा मा एक सानो ठाउँ को आवश्यकता छ, त्यसैले यो मापन मा हेर्न को लागी चोट लाग्दैन यदि उदाहरण को लागी, तपाइँसँग छ। एक पर्खाल को बिरुद्ध एक्वैरियम।
वास्तव मा एक्वैरियम को प्रकार ब्याकप्याक फिल्टर को लागी एक समस्या छैन, धेरै विपरीत, पछि आफ्नो बहुमुखी प्रतिभा को कारण, उनीहरु कुनै पनि कोठा मा धेरै राम्रो फिट। उनीहरुलाई रोपेको एक्वैरियम को लागी सिफारिश गरीन्छ, किनकि ट्यूब जसको साथ उनीहरु पानी अवशोषित गर्छन् झार मा लुकाउन धेरै सजिलो छ। जे होस्, याद गर्नुहोस् कि वर्तमान फिल्टर को यी प्रकार द्वारा उत्पन्न धेरै बलियो छ।
शान्त ब्याकप्याक फिल्टर के हो?
यो एक छान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ मौन फिल्टर मामला मा तपाइँ तपाइँको माछा मा तनाव गर्न चाहनुहुन्न... वा यहाँ सम्म कि आफैं, विशेष गरी यदि तपाइँ एक्वैरियम एक कोठा मा स्थापित छ। यस अर्थ मा, ब्रान्डहरु कि मौन फिल्टरहरु को पेशकश को लागी सबैभन्दा बाहिर खडा Eheim र AquaClear हो।
जे होस्, तैपनि एक फिल्टर आवाज उत्सर्जन र कष्टप्रद बिना पनि कष्टप्रद हुन सक्छ। यसबाट बच्न:
इन्जिन केही समय acclimatize गर्न दिनुहोस्। नयाँ फिल्टर रिलीज भएको केहि दिन पछि, इन्जिन धेरै आवाज बनाउन बन्द गर्नु पर्छ।
त्यो जाँच गर्नुहोस् एक कंकड़ वा कुनै अवशेष अटकिएको छैन कि कम्पन को कारण हुन सक्छ।
तपाईं पनि सक्नुहुन्छ गिलास र फिल्टर को बीच कम्पन बाट बच्न को लागी केहि राख्नुहोस्.
यदि तपाइँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ झरना त्यो सफा पानी हो कि फिल्टर बाट बाहिर आउँछ, पानी को स्तर धेरै उच्च राख्न कोसिस गर्नुहोस् (तपाइँ प्रत्येक तीन वा चार दिन रिफिल गर्नु पर्छ) ताकि झरना को आवाज यति गहन छैन।
के तपाइँ एक माछा ट्यांक मा एक झोला फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ?
जे होस् त्यहाँ ब्याकप्याक फिल्टर विशेष गरी नैनो एक्वैरियम को लागी डिजाइन गरीएको छ, सत्य यो हो एक स्पंज फिल्टर संग एक माछा टैंक को लागी हामी पर्याप्त हुनेछौं। जस्तै हामी माथि भन्यौं, झरना फिल्टर एक काफी बलियो प्रवाह को कारण हो कि नकारात्मक हाम्रो माछा लाई असर गर्न सक्छ वा उनीहरुलाई मार्न सक्छ, उदाहरण को लागी यदि उनीहरु झींगा वा बच्चा माछा हो।
यसैले यो धेरै राम्रो छ कि हामी एक को लागी छनौट गर्दछौं स्पन्ज फिल्टर, यो कुनै पानी पम्प छैन कि गल्तीले हाम्रो माछा निगल गर्न सक्छ छैन, केहि जसको संभावनाहरु छिटो छिटो सानो ठाउँ मा वृद्धि। स्पंज फिल्टर ठ्याक्कै के हो उनीहरुको नामले संकेत गर्दछ: एक स्पन्ज जसले पानी फिल्टर गर्दछ र त्यो, लगभग दुई हप्ता को उपयोग पछि, एक जैविक फिल्टर पनि बन्छ, किनकि यो माछा ट्यांक पारिस्थितिकी तंत्र को लागी लाभदायक ब्याक्टेरिया युक्त समाप्त हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ एक ठूलो माछा टैंक छ, त्यहाँ मोटरकृत फिल्टरहरु छन्।, तर पानी को धेरै थोरै मात्रा संग ठाउँहरु को लागी डिजाइन गरीएको।
हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाइँलाई यस लेखको साथ ब्याकप्याक फिल्टर को दुनिया लाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गरेका छौं। हामीलाई भन्नुहोस्, के तपाइँ कहिल्यै एक्वैरियम निस्पंदन को यस प्रकार को उपयोग गर्नुभएको छ? तपाइँको अनुभव के रह्यो? के तपाइँ एक विशेष ब्रान्ड वा मोडेल को सिफारिश गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: माछाको » Accesorios » एक्वैरियम ब्याकप्याक फिल्टर